Soomaaliya oo Ka Gudubtay Wejiga 4-aad ee Deyn cafinta – Goobjoog News
Hay’adda lacagta adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan IMF, ayaa sheegtay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka gudubtay dib u eegista 2-aad wajigiisa 4-aad ee deyn cafinta loo sameynayo dowladda Federaalka.
Hay’adda oo warsaxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in xukuumadda Soomaaliya ay dadaal badan ku bixisay sidii deymaha looga cafin lahaa, waxa ayna sidoo kale hay’addu dowladda ku amaantay sida ay xoogga u saartay kobcinta dhaqaalaha.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo ka hadlay warka ka soo baxay hay’adda Lacagta addunka ee IMF, ayaa xusay in warkani uu guul u yahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed.
Beyle oo arrintaas ka hadlaya waxaa uu yiri“Waxaa si guul ah noogu dhamaaday hanaankii SMP4 oo ahaa wajigii 4aad ee shuruudaha deyn cafinta Soomaaliya”.
Wasiirka maaliyadda oosii hadlay “Tani waa tilaabo weyn iyo natiijo muujineysa inagoo wadajirna in ay naga go’neyd horumarinta Maaliyadda Dalka”
“Soomaaliya hore ayay u dhaqaaqday, marka loo eego isbadalada iyo dib-uhaneynta Maaliyadda” ayuu yiri wasiir Bayle.
Soomaaliya ayaa lagu wadaa in sanadkan bartamihiisa loo ogolaado ama laga fududeeyo deynta ama loo ogolaado maalgeshi.
Shir Looga Hadlayo Qaxootiga Afrika Oo Ka Furmaya Malta
B/weyne: Ciidamada Ammaanka Oo Gacanta Ku Dhigay Nin Toorey Ku Dilay Haweeney
Colby Melton says:
Giving Keflex With Probenecid [url=http://buycialisuss.com]Cialis[/url] Purcahse Diflucan One In Canada Buy Cialis Generic Viagra 100mg Tablets
What Is Keflex Medication For [url=http://cheapcialisir.com]Cialis[/url] Buy Colchicine Tablets Cialis Cialis 10mg Acheter
Wtskbu tglctn Buy real viagra online without prescription cialis without a doctor prescription
Zevrxx mtwksj Real viagra cialis coupon cvs
Zzydtt ucdmrb tadalafil 20mg when will generic cialis be available
Saraakiisha Maamulka Jubba Oo Faah Faahin Ka Bixiyay Howlgalo Ay Ka Sameeyeen Kismaayo Iyo Nawaaxigeeda (Dhageyso)
how to get cialis 800mg cialis self life cialis 800mg black...
cialis 20 mg from united kingdom cialis daily cialis black 8...
warfarin 5 mg canadacost of warfarin
donepezil canada donepezil 5 mg onlinedonepezil coupon donep...
cialis paypal cialis and viagra taken together buy cialis on...
generis cialis buy generic cialis canada cialis 20mg canada...